Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Kooxda Real Madrid oo u geeriyooday Coronavirus – Gool FM
(Madrid) 06 Maajo 2020. Real Madrid ayaa ku dhawaaqday in masuul kale oo kooxdeeda ah uu u geeriyooday caabuqa Coronavirus, kaddib in muddo ah oo lagula tacaalayey isbitaal ku yaalla dalka Spain.
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Kooxda Real Madrid, Suarez ayaa u geeriyooday xanuunka Coronavirus isagoo jiray da’da 76-sano.
Amador Suarez, kaasoo Real Madrid Madaxweyne ku xigeen u soo noqday waqtigii Ramon Calderon uu madaxweynaha ahaa intii u dhaxaysay 2006 iyo 2009 ayaa geeriyooday kaddib 40 cisho oo uu la xanuunsanayey Coronavirus.
Wuxuu xubin ka ahaa Real Madrid ilaa sanadkii 1964-kii, wuxuuna lahaa kaarka lambarkiisu yahay 10,319, wuxuuna ku dhashay Huelva 12-ka bishii Febraayo sanadkii 1944-kii, inkastoo uu hadda ku noolaa San Sebastian, halkaas oo uu ku dhintay kaddib 40 maalmood oo uu ku jiray Isbitaalka.
Suarez waxyaabaha lagu xasuusto waxa ka mid ah inuu ku guuleystay abaal-marinta hal-abuurka ganacsiga sanadka ee Huelva Federation of Businessmen, taasoo uu helay sanadkii 2003, kaddib markii shirkaddiisa kalluumaysigu ay wax-soo saarkeeda gaarsiisay Adduunka oo dhan.
Sidoo kale waxa uu sodog u ahaa gabadha la yiraahdo Cristina Garmendia, taasoo ahayd Wasiirka Sayniska iyo curinta Spain.
Manchester City oo adeegsanaysa Nicolas Otamendi si ay gacanta ugu soo dhigto Lucas Martinez
Cesc Fabregas oo shaaca ka qaaday in Neymar Jr uu la heer yahay Ronaldinho